Mayelana Nathi - Shanvim Industrial (Jinhua) Co., Ltd
SHANVIM yasungulwa ngo-1991 singabahlinzeki abahamba phambili emhlabeni wonke ngezingxenye ezigugile nezisombululo ezimbonini zokucubungula izimbiwa, ukuhlanganisa, ukwakha kanye nokugaywa kabusha.
Ngeqembu labantu abasha, abanamandla nabanogqozi, sisebenza ndawonye ngokuzinikela ukuze sisize amakhasimende ehlise izindleko, sikhulise ukutholakala kwezingxenye, sinciphise isikhathi sokuphumula futhi sinikeze...
SHANVIMuzibophezele ekunikezeni izixazululo zokugqoka ezinokwethenjelwa kodwa ezithengekayo zezimboni zezimayini nezihlanganisiwe. Yonke imikhiqizo yethu yenzelwe amakhasimende ngendlela efanele, ukuze ikwazi ukushintshaniswa ngokuphelele ...
I-SHANVIM Wear Solutions
UMHLANGANISI WEZINXENYE ZOKUGQOKA OMHLABA WONKE
Sinesipiliyoni Esisebenzayo Seminyaka Engaphezu Kwengu-30+ ku-Ejensi
Imboni ye-Shanvim （Jinhua） Co., Ltd. uzibophezele ekuletheni izixazululo ezibiza kakhulu ezihlanganisa ukuklama, ukukhiqiza, ukusebenza, isevisi yangemuva kokuthengisa kanye nokugcinwa kwemishini yokuchoboza nokuhlola, ukudala amanani engeziwe kumakhasimende.
Ngokuya kokuhlangenwe nakho kwethu kwemboni iminyaka eminingi, ubuchwepheshe obujulile kanye nethimba lochwepheshe, senze uhlelo lokuphatha oluzwakalayo, olujwayelekile, futhi sasungula ukubambisana kwamasu okuhlala isikhathi eside, okuzinzile nezinkampani eziningi zangaphandle. Ngakho-ke, sisesimweni esihle sokunikeza uhla olugcwele lwemikhiqizo nezinkonzo ezisezingeni eliphezulu kumakhasimende ethu asekhaya nawakwamanye amazwe emikhakheni yokwakhiwa kwengqalasizinda, ezobunjiniyela, izimayini, inhlanganisela yesihlabathi namatshe, kanye nemfucuza eqinile, phakathi kokunye.
Ngokukhula okuqhubekayo kwebhizinisi, sihlinzeka ngomklamo wezinga eliphezulu wayo yonke iphrojekthi yezimayini, futhi sinikeza isixazululo sawo wonke umugqa wokukhiqiza isikhathi eside sokugqoka izingxenye, okwenza kube nokwenzeka ukuthi izitshalo zakho zehlise izindleko, zandise umkhiqizo, futhi ngcono ukusebenza kahle.
Khonamanjalo, sethule isevisi eyodwa-stop yezinkampani zakwamanye amazwe, sikhuthaza ukubambisana nabahlinzeki baseShayina, futhi sakha izinhlelo zonyaka zokuthenga ukuze kuqinisekiswe izinga lomkhiqizo nokuzinza. Ochwepheshe abakhethekile baphinde bakhethelwe ukwenza ukuhlolwa kokukhiqiza kanye nomkhiqizo, futhi baxhumanise futhi baxazulule izinkinga zobuchwepheshe, zekhwalithi kanye nezokuthutha eziphathelene nezokuthutha eziphephile nezilula.
Sesisungule ubukhona ekhaya naphesheya. Ngaphezu kwezifundazwe ezingaphezu kuka-20, izifunda ezizimele kanye nomasipala baseChina, imikhiqizo yethu iphinde ithunyelwe emazweni angaphezu kuka-30, njenge-Australia, Canada, Russia, South Africa, Indonesia, Zambia, DR Congo, Kazakhstan, Chile, kanye nePeru, ukubala nje ezimbalwa.
Ukuqamba okusha kwesayensi nenqubekelaphambili yi-DNA yethu. Sifuna ukukhulisa ibhizinisi lethu ngendlela ephephile nevumelana nemvelo, futhi sisize abasebenzi bethu bathuthukise ukuncintisana ngokubanikeza ukuqeqeshwa kanye namathuba okuthuthukisa amakhono, futhi kusenze sibe inkampani yomhlaba wonke ngempela. Umgomo wethu uwukwenza inkampani yakho ikwazi ukuzuza impumelelo eyengeziwe ngenzuzo engcono nokuncintisana.
Silwela ukwakha uhlobo olulodwa olubaluleke kakhulu emkhakheni, futhi sibe ngabahlinzeki bakho bezixazululo zesistimu.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nemikhiqizo namasevisi ethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi futhi uvakashele isayithi lethu.
Sibheke phambili ekusebenzeni eduze nokugcina ubudlelwano besikhathi eside nawe.